Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY : Very an-javony ilay “etika politika”
INTY SY NDAY : Very an-javony ilay “etika politika”
Nitsingerina ny faha-25 jolay teo ny faha-13 taona nahafatesan’i Herizo Razafimahaleo. Tsy zoviana amin’ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena izy sy ny fanaovany politika. Nitana anjara-toerana teo amin’ny tontolo politika Malagasy ny fisiany teo amin’ny sehatra politika teto Madagasikara hatramin’ny taom-polo 90 ka hatramin’ny nahalasanany any amin’ny mandrakizay. Iray amin’ireo singa politika nahatsiarovana an’i Herizo Razafimahaleo ny “Etika Politika”. Izany hoe ny soatoavina fanaovana politika. Foto-kevitra no mibaiko rehefa manao politika, hoy izy, ary io foto-kevitra ijoroana io no iainana fa tsy hatopatopan’ny rivotra etsy sy eroa. Ny fanaovana politika koa tsy famonoana olona na fanonganam-panjakana amin-kery. Dia tsaroana izany amin’izao fotoana satria marobe ny mpisehatra politika tsy ahitana firy intsony an’izay “etika politika” izay.
Nanana fitsipi-pitondran-tena mifanaraka amin’ny fanajana ny “etika politika” ry Herizo Razafimahaleo na niara-dia tamin’ny fitondrana ry zareo na nanohitra. Azo ambara fa ny fifotorana tamin’izay “etika politika” izay no nampahomby ny fampandresena an’i Andry Rajoelina ho ben’ny tanànan’Antananarivo tamin’ny fotoana andro satria isan’ny nametraka ny paika ady tamin’izany i Herizo Razafimahaleo.
Ny Monima notarihin’i Monja Jaona koa tamin’ny fotoanandro no nanana “etika politika” ary nitaizany sy namolavolany mpanao politika sady tia tanindrazana marobe nandritra ny fotoana maro, na tany amin’ny sehatry ny fanoherana hatrany aza izy.
Amin’izao fotoana dia mitamberina ao an-tsaina ny foto-kevi-dehibe nivoitra tamin’ny fanomezana lanja izany “etika politika” izany. Nampalahelo fa raha vao lasa i Herizo Razafimahaleo dia toa tsy nivoitra firy na tamin’ireo mpiara-nikatroka tamin’i Herizo Razafimahaleo tao anatin’ny Leader Fanilo aza izay “Etika Politika” izay. Ny tsy tao anatin’ny Leader Fanilo moa dia tsy mahagaga. Mbola velon’aina any ny maro amin’ireo niara-dia tamin-dRazafimahaleo, ka heverina fa hanana fahasahiana hijoro amim-pahamendrehana izy ireny amin’izao fotoana fa tsy ho menatra ny nataony ka hisitrisitrika any. Aiza ianareo ry Toto Alphonse, ry Razanamahasoa Christine, ry Rakotomamonjy Jean Max, ry Manasse Esoavelomandroso, ry Rija Rajonhson, ry Rabeza Zafera Antoinne, ry Andriambelomiadana, ry Noel Andriamiarisatrana, ry Ramarokoto Bernard sy ny maro tsy ho voatanisa?
Raha ny tontolon’ny raharaham-pirenena ankapobeny no itarafana ny “etika politika” dia mampahonena satria mety ho very anjavony koa, sanatriavina, ny ain’ireo nitolona namoy ny ainy, ireo nampandriaka ny rany, namoy havana, nahapotika ny fananany, nahafoy ny asany… ho amin’ny fiovana tena izy, raha tsy omena fitokisana ny mpanao politika tena izy sady tena tia tanindrazana izay manana ny “etika politika” fa tsy mpanao ramasabomanga sy tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoan’ny tenany, ary ny mpitsikombakomba amin’ny vahiny eo amin’ny fandrobana ny harem-pirenena eto.